Soomaalida ay sharciga siisay Sweden 2011 | Somaliska
Sanadkaan hada socda ee 2011 ayaa Laanta Socdaalka Sweden waxay go'aan ka gaartay 638 qof oo Soomaali iska dhiibtay dalka gudahiisa. Guud ahaan dadkaas waxaa sharci la siiyay 373 qof iyadoo diidmo loo tuuray 44 qof. Halka 152 qof lagu celiyay wadamo Yurub ah oo ay faro ku lahaayeen. 68 qof codsigooda lama eegin waayo waxaa loo arkay in uusan sal lahayn. Guud ahaand dadkaan go'aanka laga gaaray ayaa waxaa caruur isku dhiibay 44 qof, 34 ka mid ah dadkaas sharciga waa la siiyay, 4 waa la diiday, 4 waxay lahaayeen faro, halka 2 aan kiiskooda la eegin maadaama loo arkay in uusan sal lahayn. Dhinaca kale warbixinta ay soo bandhigay Laanta Socdaalka waxaa lagu muujiyay in 23 qof oo qaxooti (Geneva) Soomaali ah degenaansho lagu siiyay la mideynta qoyskooda. Halka 22 (aan Genava ahayn) lagu siiyay deganaanshaha mideynta qoyskooda. makala cada in dadkaan degenaansha la siiyay ay wadanka soo galeen iyo in kale. Warbixintaan kuma jirto dadka loo diray maxkamadaha ee ama la diiday ama la siisay degenaanshaha. Sidoo kale tiradaan kuma saabsana dadka iska dhiibay Sweden 2011 ama kuwii sanadkii hore ee aan wali go'aan laga gaarin. Migrationsverket.se
Sanadkaan hada socda ee 2011 ayaa Laanta Socdaalka Sweden waxay go’aan ka gaartay 638 qof oo Soomaali iska dhiibtay dalka gudahiisa. Guud ahaan dadkaas waxaa sharci la siiyay 373 qof iyadoo diidmo loo tuuray 44 qof. Halka 152 qof lagu celiyay wadamo Yurub ah oo ay faro ku lahaayeen. 68 qof codsigooda lama eegin waayo waxaa loo arkay in uusan sal lahayn.
Guud ahaand dadkaan go’aanka laga gaaray ayaa waxaa caruur isku dhiibay 44 qof, 34 ka mid ah dadkaas sharciga waa la siiyay, 4 waa la diiday, 4 waxay lahaayeen faro, halka 2 aan kiiskooda la eegin maadaama loo arkay in uusan sal lahayn.
Dhinaca kale warbixinta ay soo bandhigay Laanta Socdaalka waxaa lagu muujiyay in 23 qof oo qaxooti (Geneva) Soomaali ah degenaansho lagu siiyay la mideynta qoyskooda. Halka 22 (aan Genava ahayn) lagu siiyay deganaanshaha mideynta qoyskooda. makala cada in dadkaan degenaansha la siiyay ay wadanka soo galeen iyo in kale.
Warbixintaan kuma jirto dadka loo diray maxkamadaha ee ama la diiday ama la siisay degenaanshaha. Sidoo kale tiradaan kuma saabsana dadka iska dhiibay Sweden 2011 ama kuwii sanadkii hore ee aan wali go’aan laga gaarin.
asc jimcaale waxaan ku weydiinaa adoo raali ah dadka (Geneva)heesto oo loo diray maxkamada waxa ogolaashaha lasiiyay maku jiraan mase kuma jiraan?
Warbixintaan kuma jiraan dadka maxkamada loo diray. Waa dadka ay Migrationsverket sida tooska u siisay ogolaanshaha.
asc walaal waxaan ku weediiye dak aqalaasha lasiiyey maxaa loosaaray oobaas boor ah viisah
March 25, 2011 at 16:05
Asc walaal jimcale waxad noso shegtay in dib loo dhigay arinta ka doodida arimaha sogalootiga parlamanka ila 4may. Waxan hada ka arkay riksdag news update in 30bisha ay ku qoraan tahay in laga doodi doona waxna iska bedelin qorsha. Waxad fadlan eegta jadwalka usubuca so socda parlamank. Riksdag home ka eeg. Waxad ka hele qorshaha usbuca so socda.wadna mahadsantahy asc
asc, walal yaal .dadkaabn,sharciyada la siyay .madad swedan ka baxsanbaa ,mise waa dad gudaha sverige ku jiro,
Maryan iyo Dhool: Dadkaan waa dad Sweden gudaheeda iska dhiibay oo gudaha wadanka jooga. Marka laga reebo 45 qof oo lagu siiyay qaraabo darteed dadkaas ma sheeki karo in ay wadanka joogaan iyo in ogolaansho la siiyay balse aan wali la soo qaadin.
Ahmed: Waa kala duwantahay dooda uu baarlamaanka yeelanayo 30ka bisha iyo mida go’aanka looga gaarayo Socdaalka. Dooda dhaceysa 30bisha waa mid siyaasadeed oo ay codsadeen xisbiga Cunsuriga SD waxay ka doodi doonaan siyaasada soo galootiga Sweden.
4ta May ayaa laga doodi doonaa sharciyada quseeya Socdaalka iyo Soo Galootiga iyadoo go’aan laga gaari doono. Insha Allah
waa idin salamey dhaman inta webkan ku xiran waxaan rabaa inaan weydiiyo dadka ku shaqada leh maxaa wax ugu dhihi weysey dad somali ah oo ku dhabaateysan italia ama gariiga ama malta maxaa dhibkooda xataa ama sharciya dublin wax ugu soo bandhigi weysey waxa ay dhaheen waxaa xaq ku leh wadanki kugu horeeyey inaa jogto wadanki igu horeeyey maxaa xaq loogu leeyey taas ma la is weydiiyey mise webkan waxaa logu tala galey dad jogo sweden oo kaliya tas ayaa rabey inaan weydiiyo ishalah
sxb runtii waan jeclahay in Soomaalidu meelkasta oo ay joogto dhibka ka baxdo. Ujeedkaan Somaliska u bilaabay waxa uu ahaa in Somalida Sweden ay akhbaar helaan, waan ka qornay arimaha giriiga dhowr jeer balse dhibaatada haysata dadka reer giriig anaga kama saari karno. Siyaasada Dublin waa mid ay ku wada simanyihiin Midowga Yurub, waxaa la dhihi karaa Sweden waa wadanka ugu roon markii la dhaho sida ay ula dhaqmaan Soomaalida ka timaada Giriiga oo mar hore la joojiyay musaafurintooda.
Soomaalidu meelkasta oo ay joogaan dhibaato ayay ku jiraan haddaan dhahdo dhamaan wax ayaan ka qoreynaa runtii waqti uma helayo, anigana lacag igama soo gasho boggaan ee si mutadawacnimo ah ayaan u shaqeeyaa. Marka hada ahmiyadeena waa in aan indhaha u furno Soomaalida Swede ku nool oo ay akhbaar helaan..
asc dhaman bahda somaliska waxan su al weydinaya jicmale walal ado mahadsan dadka laga qado Dna da hadana loso jawabay oona lagu yiri wa ok maxay tahay marka waxa kale ee laga rawo maxayse ku kala duwanyihin dooda 30ka bishan iyo mida 4 may
Sxb waxay ila tahay in ay sugayaan in laga qaado shuruuda baasaboorka. waayo xitaa haddii ogolaansho la siiyo qofka afrika jooga Sweden ma imaan karo maadaama Maxkamada ay mamnuucday bixintii baasaboorka Framlingspass aysana Sweden aqoonsaneyn baasaboorka Soomaaliga.
Marka waxay noqoneysaa in maxkamada ama baarlamaanka ay shuruudaas ka qaadaan Soomaalida.
Dooda 30 bisha ma ahan mid go’aan lagu gaarayo ee waa dood siyaasadeed oo si guud ahaan ah looga doodayo xaalada siyaasada soo galootiga waxaa codsaday xisbiga SD. 4ta Bisha May ayaa waxaa laga doodayaa ilaa 50mooshin oo ku saabsan socdaalka kuwaasoo ka dib loo codeyn doono.
thanks too much jimale
asc jimcaale waxa aan kaa codsanayaa hadii ay suura gal tahay somaliska qaybta arimaha bulshada lagu daro qayb cusub oo ku qoran af sweidhish ama loo turjumay mawduucyada xiisaha gaarka ah leh ee ku dhacday qof saameyna ku yeelan karta sharciga swededen iyadoo sidoo kale la war galinayo dhamaan dadka ay quseyso la socoshada dhibka iyo xalinta arimaha somalida si ay ula socdaan ee u akhriyaan si ay u helaan macluumad dheeri ,lana war galiyo hayadaha ay khuseyso in ay halkaas kala socdaan arimaha soomalida si loo xaliyo dhaga la,aanta ay kuwada nool yihiin somalida iyo dawladu bal wixii aad ka qabto ila soo xiriir fadlan
Sxb waa fikrad aad u wanaagsan, balse aniga aqoonteyga Swedishka sidaas uma sareyso – waqtigeygana waa iska yaryahay marka haddii la helo qof diyaar u ah in uu hawshaan qabto waan ku darayaa qeybtaas bogga.
Somaliska aniga lacag igama soo gasho balse waa hawl guud oo bulshadeena aan ugu faaideynayo marka waan soo dhaweynayaa qofkii jecel in uu hawshaan ka qeyb qaato.